PortableAppsPlatform — MYSTERY ZILLION
October 2009 edited May 2010 in Other
သင့်ရဲ ့မန်မိုရီစတစ်ထဲ မှာ OS ပုံစံ Platform တစ်ခုဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော ့ဒီ
Softwareလေးက သင့်ကိုကူညီပေးပါ လိမ် ့မယ်။Window7ရဲ ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ ့ပေါ ့။
OS အပြည် ့အစုံပုံစံမျိုးတော ့မဟုတ်ဖူးပေါ ့နော်။
My Document ပုံစံလေး..ဖြစ်တွားလိမ် ့မယ်. သင့်ရဲ ့မန်မိုရီစတစ်လေးဟာ။
သူရဲ ထဲ သင်ရဲ ့ဖိုင်တွေကို ထည် ့ထားပေါ ့။သူကနေတစ်ဆင့်ခေါ်ပေါ ့နော်..ပြီးရင်။
ဒီ Software လေးကို သင့်ရဲ့မန်မိုရီစတစ်ထဲ မှာ ထဲ ပြီးတော ့
Autorun လေးနဲ သာ ချိတ် ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းတစ်ကာ အကောင်းဆုံးဖြစ်
သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ သင့်ရဲ့မန်မိုရီစတစ်လေးဟာ ဆိုရင်ပေါ ့။အသုံး၀င်မယ်ထင်ပါတယ်။
သူရဲ ့ဒီဇိုင်းမှာ ပါတဲ့Themes တွေကို ထည် ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့Window7Themes ပုံစံလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ဒီမှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
http://sourceforge.net/projects/portableapps/files/PortableApps.com Themes/Windows 7/windows7.patheme/download
သူရဲ ့အခြားပေါင်းစပ်ပေးနိုင်တဲ့Application တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
PortableAppsPlatform ကို Run ပါ။
ပြီးရင် Option ထဲ က installanew app ထဲ ကနေ
သွား ပြီး ကိုယ် ထည် ့ချင်တဲ့Portable ကို သွား Run ပေးရ ပါတယ်။
သူ ၇ဲ့Application ပဲ ဖြစ်ရပါ ့မယ်။ အောက်မှာ List နဲ ့ဖေါ်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျ။
ဒါတောင် အဲဒီ Application တွေ ရဲ့အောက်မှာ အများကြီးရှိသေးတယ် ..တစ်ခုခြင်းစီရဲ ့အောက်မှာနော်..အားလုံးကို တင်ပေးရင် မ၇လို ့...ဒီလောက်ပဲ သိသလောက် Share ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
http://portableapps.com/node/20013 နဲ ့
တို ့မှာ သွားရောက်ကြည် ့ရှု ့နိုင်ပါသည်ခင်ဗျား။
အရင်ကတော့ သုံးဖူးတယ်ခင်ဗျ.. သိပ်မသုံးတတ်တာနဲ့ ဒီတိုင်းထားလိုက်တာ.. အခုတော့ သုံးနည်းသိရပြီဆိုတော့ ပြန်ဒေါင်းသုံးကြည့်ဦးမယ်.. ကျေးဇူးကိုဇာနည် ဇူးဇူးရေ..
Thank for sharing that to everyone. I like to add up some advice . If downloading the Portable apps. Dont install the Suit if u have formatted the USB Drive or Flash Stick with less than 8000 sector size.
It is better to download the platform first and install one by one for the application that u want. or the program will crash after installation and taking out the USB. If u put back again the program will be lost.
I have tried may time trying to fix that with my new 32 GB USB stick. until come up with the step by step process. If you dont find any other applications that u dont see on the web. Just follow to the Application that u want and look for Portable Apps. download it and installed it. Enjoy. Always remember to install in the folder of Portable Apps >>Applications.